Sarkaal ka tirsan CIA-da Mareykanka oo lagu dilay Soomaaliya - Awdinle Online
Sarkaalkaan oo la sheegay in uu ka tirsanaa Hay’adda Dambibaarista Mareykanka ee CIA-da ayaa sidoo kale ahaa Rug cadaa muddo ka Shaqeeynayay arrimaha Sirdoonka dhinaca Dibadda, waxaana lagu dilay Gudaha dalka Soomaaliya.
Sida uu qoray Wargeyska New York times Sarkaalkaas ayaa kamid ahaa Ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya gaar ahaan qeybta taakulada, hayeeshee Wargeysa uu sheegay in uu ku dhintay dagaal ka dhacay gudaha Soomaaliya.
Saraakiisha ciidamada Mareykanka ee ka howlgalla Soomaaliya dhankooda kama hadlin dilka Sarkaalka ka tirsan CIA-da Mareykanka ee lagu dilay Soomaaliya, kuwaas oo caawiya Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan Amray in dalal ay kamid tahay Soomaaliya laga soo saaro ciidamada Mareykanka ah ee jooga, taas oo kamid aha Amarada uu doonayo in la fuliyo ka hor inta uusan xilka wareejin.
Mareykanka ayaa Soomaaliya waxaa ka jooga in ka badan 700 oo Askari, kuwaas oo tababaro siiya Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, waxaana mararka qaar ay ka qyeb qaataan howlgallo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab.
Previous articleCiyaaryahankii Caanka ahaa ee Maradona oo geeriyooday
Next articleShirka Musharixiinta Madaxweynaha oo Warmuriyeed laga soo saarayo